प्रतिरोधी क्षमता विकसित गर्ने ८ प्राकृतिक तरिका, जीवनशैलीमा गर्नुहोस् यस्ता परिवर्तन !! | सुदुरपश्चिम खबर
प्रतिरोधी क्षमता विकसित गर्ने ८ प्राकृतिक तरिका, जीवनशैलीमा गर्नुहोस् यस्ता परिवर्तन !!
यदि तपाईंलाई आफ्नो प्रतिरोधिका लागि सप्लिमेन्टमाथि विश्वास छ भने थोरै सम्हालिनुहोस् । अमेरिकाको नेशनल इन्स्टिच्यूट अफ हेल्थका अनुसार कुनै पनि सप्लिमेन्टले कोरोनाभाइरसबाट जोगाउने वा यसको उपचार गर्न सक्ने कुनै प्रमाण छैन । यद्यपि, केही अनुसन्धानका अनुसार भिटामिन सी, डी र जिंक सप्लिमेन्टले शरीरको इम्यून रेस्पोन्सलाई बलियो बनाउँछ । (ratopati.com बाट सभार)